Accueil > Newsletters > Filazam-baovao faha-82
« Newsletter n° 82
Filazam-baovao faha-83 »
publié par Admin, le samedi 28 octobre 2017
Manoloana ny fanasazian’ny Tribonalin’i Mananjary roa taona an-tranomaizina, sazy mihantona, an’Atoa RALEVA, mpiaro ny Tontolo iainana, tamin’ny 26 ôktôbra 2017 teo, nohon’ny fitoriana azy hoe "nisandoka andraikitra", izahay mpikambana ao amin’ireto fikambanana miaro ny zo maha-Olombelona sy avy amin’ny Firaisamonim-pirenena ireto : Amnesty International, CCFD-Terre Solidaire, CIVICUS, CRAAD-OI, Fikambanana TANY Miaro ny Tany Malagasy ary Front Line Defenders dia manindry ao amin’ity Fanambaràna iombonana ity fa :
"Ny fanasaziana roa taona an-tranomaizina, sazy mihantona, an’Andriamatoa RALEVA dia mampiseho mazava ny fironan’ny Manam-pahefàna hampiasa ny rafitry ny Fitsaràna hampanginana ireo mpiaro ny zon’olombelona sy hanakanana azy ireo tsy hanao ny asany.
"Io olona io dia nosaziana noho izy namaky bantsilana ny asa tsy ara-dalànan’ny orin’asa sinoa iray eto Madagasikara. Tokony ho fafàna avy hatrany izany sazy mihantona izany ary tokony tsy hahitàna fanamelohana azy noho ny asa ataony am-pilaminana amin’ny maha-mpiaro ny zon’olombelona azy ao amin’ny taratasin-draki-panamelohany (raki-tsazy / "casier judiciaire").
Voasambotra tao an-tanànan’i Vohilava tamin’ny 27 septambra 2017 Andriamatoa RALEVA. Nosamborina izy noho izy nangataka hijery ny taratasy fahazoan-dàlana hitrandraka sy ny fahazoan-dàlana ara-tontolo iainan’ilay orin’asa sinoa mitrandraka volamena ao Mananjary. Ny asany ao amin’ny fikambanana miaro ny zon’olombelona roa ao an-toerana no nahatonga azy nanao izany. Tamin’ny 26 ôktôbra 2017 no nisy fitsaràna ka nafahana avy any am-ponja Andriamatoa RALEVA rehefa nogadraina vonjimaika 25 andro, saingy nolazain’nyfitsarana fa meloka noho izy nisandoka ho "sefon’ny distrika".